UV LED Vagadziri & Vatengesi | China UV akatungamira fekitori
Kubwinya kwepamusoro kwechiedza ne lens 2835 UVA dzakateedzana
Chigadzirwa Chigadzirwa Ultraviolet radiation ndeyemhando yemagetsi emagetsi, ayo asiri iwo anoonekwa mwenje asi chidimbu chemagetsi emagetsi kunze kwechiedza chepepuru chinoonekwa. Iyo yakasarudzika renji yeiyo ultraviolet radiation ndeye 100-380nm, uye chikuru sosi sosi yeiyo ultraviolet radiation mwenje wezuva. Inoita basa rakakosha muhupenyu paPasi, kazhinji zvichienderana nehunhu hwayo. UV mwenje sosi yave ichishandiswa zvakanyanya muplate yekuomesa, kuburitsa, kuporesa mwenje nemimwe michina, mu ...
Kurumidza kurapa kugona 5054 UV LED
Chigadzirwa Chigadzirwa Ultraviolet radiation ndeyemhando yemagetsi emagetsi, ayo asiri iwo anoonekwa mwenje asi chidimbu chemagetsi emagetsi kunze kwechiedza chepepuru chinoonekwa. Iyo yakasarudzika renji yeiyo ultraviolet radiation ndeye 100-380nm, uye chikuru sosi sosi yeiyo ultraviolet radiation mwenje wezuva. Inoita basa rakakosha muhupenyu paPasi, kazhinji zvichienderana nehunhu hwayo. UV mwenje sosi yakave yakashandiswa zvakanyanya muplate yekuomesa, kuburitsa, kuporesa mwenje nemimwe michina, muPCB ...
Kuvimbika kwakakwirira 3535 UVC mwenje wechiedza
Chigadzirwa Chigadzirwa Iyi 3535 LED Mwenje Sosi ndeye yakakwira mashandiro emagetsi anoshanda mudziyo unogona kubata yakakwira kudziya uye yakakwira kutyaira ikozvino. Iyo Ultraviolet LED mwenje sosi ine yepamusoro wavelength kubva pa 270nm kusvika285nm. Ichi chikamu chine tsoka yekutsikisa inoenderana kune akawanda akaenzana saizi LED mumusika nhasi. Kukura: 3.5 x 3.5 mm Ukobvu: 1.53 mm Makiyi Makuru ● Kuvimbika kwakanyanya ● Yakadzika UV LED ine emission wavelength pakati-270nm kusvika 285nm ● Inoenderana neye reflow solder ...